दिदीले पुति चलाइदि छामछुम गरि अनि बिस्तारै पुतिलाई निचोर्न थाली - Nepali Sex Tube
दिदीले पुति चलाइदि छामछुम गरि अनि बिस्तारै पुतिलाई निचोर्न थाली
मेरो नाम सु्ष्मा हो अनि मेरो दिदीको नाम स्वेता। घरमा हामी अनि ड्याम मम हुनुहुन्छ। मेरो र दि’को age gap धेरै छैन। त्यसैले हामीहरु एकदम क्लोज छौँ। हामी सबै कुरा सेयर गर्छौ। आफ्नो लाइफमा आएका bf हरुको अनि bf संग भएका हल्का रोमान्सहरु सबै सेयर हुन्छ हामी बीच। अब कथामा आउँछ।घरमा म र दि मात्र थियौँ त्यो दिन। मम र ड्याड दुवैजना अफिस जानु भएको थियो। म टिभी हेर्दै थिए अनि दिदी त्यही भोली आफ्नो bf संग डेट जानलाई रेडि हुँदै थिइ।
यत्तिकैमा दि’ले मलाई बोलाएर अनि सोधी फ्रि छस् कि नाईँ भनेर। मैले अँ फ्रि नै हो के हो भन न भने। दिदीले भोली bf संग दिउँसो होटलमा बस्ने प्लान छ, त्यहि भएर waxing गर्न लागेको यसो हेल्प गर्देन भनी। मैले भने, जाबो वाक्सिङ गर्न नि म आउनु पर्छ?हैन क अरुठाउँमा त सक्छु तर बिकिनी वाक्सिङ गर्न गाह्रो पर्छ के, दुख्छ साह्रै अनि निकाल्नै डर लाग्छ मलाई, निकाल्दे न ,भनी।म नि अल्छि लागेर बसिरहेको थिएँ। अनि हुन्छ भन्दे।
हामी दिदी बहिनी एक अर्काको अगाडी ना्ङ्गै पहिले देखि बस्थ्यौँ। हामीहरु एक अर्काको अगाडी नाङ्गो हुनु हुनै shocked हुने कुरा थिएन। दिदीले आफ्नो लुगा सबै फुकाली अनि मेरो अगाडी नाङ्गो भएर बसी। वाक्सिङको सामानहरु त्यही थियो। पहिले खुट्टाको र हातको वाक्सिङ गर्नु थियो। मैले जानी जानी जोडसंग वाक्सिङ गर्दै दिदीलाई सताइराखेको थिए। दिदीले बिस्तारै गरन भन्दै कराउँदै थिए।
मैले,तैले bf संग मज्जा लिनु पर्ने होइन, ल अलि अलि दुख्नु नि पर्छ भन्दै जिस्काउन थाले।
त्यसपछि दिदीले ल अब यो बिचको निकाल्नु पर्यो भनी। बिकिनी वाक्सिङ अति दुख्छ के दुख्न त, तर its worth.
अनि मैले पहिले क्रिम लगाएर पछि वाक्स स्ट्रिप लगाइँदिए। एकछिन हामी गफ गर्यौं। अनि निकाल्नलाई रेडी भयौँ। दिदीलाई बिकिनी वाक्सिङ अति नै डर लाग्थ्यो। आंखा चिम्म गेरेर बिस्तारै गरहै भनी। बिस्तारै गरे झन् दुख्छ, मैले झ्वाट्टै तानिहाले, सब निकाल्देँ।
त्यसको पुति सफा भएको थियो तर रातो पनि भयो। ओहो दुख्यो दुख्यो भनेर कराउन थाली। मैले केही हुन्न पख त्यो अर्को तेल लगाइदिन्छु भने। अनि तेल लगाइदिए। तेल लगाउदा लगाउँदै मैले दि’को पुति चलाउँदै थिए। मज्जा आइरहेको थियो। त्यस्तो पुतिको माथीको भागमा बिस्तारै बिस्तारै मालिस गर्दिन थालेको थिए।
दि’लाई नि दुखेर होला, मैले चलाइदिए पछि आनन्द मानिरहेकी थिए। तर मलाई त्यसको पुति rub गर्नमै मजा आइरहेको थियो। वाक्सिङ गरेरको एरिया भन्दा पनि त्यसको पुतिमै चलाइरहेको थिए।
कतिखेर हात चिप्लेछ थाहा थिएन तर मैले त्यसको पुति भित्र फेरी औला छिराएँ। भित्र पुरै wet थियो। दिदीले क गर्छे यो भनेर भनी। मालिस गर्देको नि तलाई दुखेको भनेर, मैले हाँसेर रिप्लाइ गरे। दिदी नि हाँसी।
त्यसपछि मैले दिदीको पुतिमा फिङ्गरिङ गर्न थाले। दिदीले मज्जा लिन थाली। अनि सोधे, ‘दुख्न छोड्यो?’
‘अँ हल्का हल्का दुखेको छ’, भनी।
‘ल पख अझ बिसो गर्दिन्छु’ भनेर मैले फिङ्गरिङ गर्न छोडे अनि सिधैँ मुख जोडेर किस गरे दिदीको पुतिमा। दिदीले ummmmmmmmmmm ahhhhhhh गरेर moan गरि। मैले दिदीको पुति wild पाराले लिक गर्न थाले। दिदीको पुतिबाट नुनिलो रस निस्किराको थियो। दिदी नि खुब मज्जा लिँदै थिइ।
त्यसपछि मैले दिदीको दुध चलाउन थाले। एक हातले फिङ्गरिङ गर्दै मुखले दुध चुस्दै बसे। दिदीको गोलो ठूलो boobs चुस्दै गर्न थाले। दिदीले पनि ‘फिङ्गरिंङ फास्ट गर्न न…ahhhhhh…. दुइटै औँला छिरा न…ohhhhhh….aaaaaaaaaaaa’ गर्दै कराउन थाली।
मैले पनि दिदीको पुतिमा मज्जाले फिङ्गरिङ गर्न थाले। दिदीले मलाई ‘सुष् छिटो गर न छिटो’ भन्दै उफ्रिन थाली। फिङ्गरिङ गरेको धेरै बेरमा बल्ल दिदीको orgasm भयो। दिदीले मेरो हातभरी आफ्नो पानी निकाली।दिदीले मलाई कहाँबाट सिकिस यस्तो भनेर सोधी। मैले भने, ‘मलाई लेस्बियन पोर्न साह्रै मन पर्छ। त्यहि हेरेर सिकेको’ भने।दिदीले ‘ल पख त्यसो भए तलाई नि मज्जा दिन्छु भनी अनि मलाई सुत्न लगाइ अनि मेरो shorts फुकालिदिइ। अनि पेन्टी पनि निकालिदिइ। म त परे सधै clean । मेरो pussy सफा थियो। दिदीले आफ्नो हातले मेरो पुति चलाइदि पहिले, छामछुम गरि अनि बिस्तारै पुतिलाई निचोर्न थाली। अनि आफ्नो एउटा औँला छिराइ।ohhhh मज्जा आयो। म aaaaaohhhhhhh गर्दै कराए। दिदीले बिस्तारै आफ्नो दुइटै औँला छिराइ अनि जोडसंग फिङ्गरिङ गर्दै मेरो पुति चाट्दै मलाई मजा दिन थाली। म नि आफ्नो दुध चलाउँदै बस्न थाले। दि र म दुवै जना नाङ्गै थियौं, एकअर्कोलाई खुसी पार्दै।
दिदी त अति expert रहिछ। fingering र licking एकै पटक गर्न थाली। १५-२० मिनेटमा नै मैले जोडसंग पानी निकाले….ohhhhhhoooo.. दिदीले मेरो पुतिको रस सबै मुखमा हाली।मैले दिदीलाइ भने, ‘दिदी यस्तो मज्जा त मेरो bf संग गर्दा नि आको थिएन।’
दिदीले एउटा केटीलाई अर्को केटीले मात्र स्याटिस्फाइ गर्न सक्छन्, केटाहरुले सक्दैनन्, मेरो bf ले नि केही सक्दैन भनेर हास्न थाली। हामी दुइ जना एक छिन नाङ्गै किस गर्दै सुत्यौ।
मैले जिब्रो उसको पुति वरिपरि नचाए